Niresaka ireo mpitantana ny mpanjono haran-dranomasina ary nandre izany izahay! Ny TNC dia ny fiaraha-miombon'antoka ara-pirahalahiana sy ny harena an-kibon'ny tany.
Ny Toolkit Fisheries Coral Reef Toolkit dia noforonina tamin'ny alàlan'ny famatsiam-bola be dia be avy amin'ireo mpiara-miasa aminay, toy ny WildAid ary mandrakotra lohahevitra lehibe ao anatin'izany ny jono haran-dranomasina stock assessment fomba, fitaovana ho an'ny fitantanana ny jono, ary fanaraha-maso sy fampiharana rafitra.
Azo vakiana ny boky torolàlana ho an'ireo mpitantana tsy miankina amin'ny fisotroana izay maniry hanatsara ny fitantanana ny harena an-dranomasina misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEto. Ny boky torolàlana dia manolotra fomba fijery malalaka momba ireo singa samihafa izay mamolavola paikady momba ny jono. Manoritsoritra ny fomba fitantanana ny fitantanana ny jono, raha manampy amin'ny fitaovana fiarovana amin'ny fiarovana, dia afaka manampy ireo mpikaroka momba ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fanatratrarana ny tanjon'izy ireo, dia maneho ny fomba ahafahan'ny mpitsabo mpanamboatra hampiditra ireo singa ireo ho lasa paikady momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ary manolotra soso-kevitra momba ny fomba handresena olana saro-bahana amin'ny fisarihana. fitantanana.
Hahita jono vatohara koa ianao tranga fanadihadiana mamaritra ny fanamby sy ny hetsika noraisina ary ny famintinana manampy ny zava-dehibe ny fanjonoana haran-dranomasina ary ny zavatra azonao atao mba hanatsarana ny faharetany. ankehitriny DIVE IN mba hijery!